Akụkọ - Spike na-achọ rotary meziri
Gbasaa na-achọ rotary meziri
Tọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ntụgharị tụgharịrị gaa na ntụgharị ihu akwụkwọ rotary ka ụlọ ọrụ akara na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na-apụta site na corona oria nje.
'Ọ bụ ezie na nke a abụwo oge siri ike nke afọ maka onye ọ bụla, ọtụtụ gafee nkwakọ ngwaahịa na ụlọ ọrụ akara ahụ ahụwo ịrị elu na-achọ ngwaahịa ha, ma ọ bụ site na mbido ndị ahịa ịzụ ahịa ma ọ bụ ndị na-ere ahịa na-ejupụta usoro ha. Nke a na nke a emeela ka nrụgide na nrụgide na-abawanye n'ụlọ iji nwee ike ịnapụta ezigbo ọrụ, ngwa ngwa. Ka ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na mgbake ya site na Covid-19, ihe dị mkpa na-ebuli elu na-achọ ihe nkiri rotary n'ofe ndị ahịa.
Na mbido na ịdị elu nke ọrịa a, ọtụtụ ụdị na ndị na-ere ahịa na-ese okwu site na iweghachi onye ọ bụla SKUs iji nweta ihe ha nwere ike ịbanye na pipeline. Nke ahụ ji nwayọ na-agbanwe ka ụlọ ọrụ ahụ na-ejide "nkịtị nkịtị", anyị na - ahụzi ndị ntụgharị na - aza volatility nke ntiwapụ coronavirus kpatara. Na-achọ ogo eserese na ok agba agbapụta ọsọ ọsọ na n'ụzọ ziri ezi, ọtụtụ na ndị ọzọ na-echigharịkwuru rotary ihuenyo ebi akwụkwọ.
Rotary ihuenyo ebipụta nwere ike ịnapụta ngwa ngwa mmepụta udu, dị mfe melite na nwere obere ndabere na onye ọrụ ahụmahụ nke ọma ọrụ. Ntughari Rotary na-ewepụta mmepụta dị elu dị elu nke na-adịgidekwa ike karị. Ha nwekwara ike-eji na a dịgasị iche iche nke dị iche iche ebipụta ihe, na n'ihi na mgbe niile oké ime ha bara uru karịsịa maka nnukwu iwu - ihe nke na-aghọ ihe dị mkpa maka ọtụtụ ndị ntụgharị na ọnọdụ ugbu a. Ọ bụghị naanị na ha kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ihe na ọrụ niile a na-ahụkarị, mana enwere ike ịmepụta mpempe akwụkwọ a na mpempe akwụkwọ mpịakọta, mpempe akwụkwọ na-acha oke ma ọ bụ na-ese ya kpamkpam.
Otu mpaghara na-ahụ oke nkwalite siri ike na ntanetị na-achọgharị bụ na akara aha ọgwụ. Ọdịdị ihuenyo rotary dabara nke ọma maka imepụta mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì, ihe odide zụlitere na ịdọ aka ná ntị na-emetụ n'ahụ; a na-ebu amụma ha nke ọma ma gbochie ha ịhapụ ọdịdị ha karịa ogologo ebipụta. Yiri nke ngalaba FMCG, dika ochicho maka nlekọta ahuike na ogwu ogwu, o bu ihe okike na uzo uzo gha agbaso otu uzo.
Nkọwa dị elu, ihe eji ekpuchi mkpuchi mebere site na nickel-plated steel-steel, kpuchie ya na photopolymer wee kpuchie ya na ihe nkiri ụgbọelu na-eche nche.
Ọrịa na-efe efe corona agbanweela àgwà ịzụ ahịa ndị ahịa, nke mere na ngalaba ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na ngwugwu ka na-arụ ọrụ n'ọnọdụ pụrụ iche. Ka ụlọ ọrụ a na-achọ ịlaghachi n'ụkwụ ya, ndị ntụgharị tụgharịrị na-achọpụta na ihu igwe na-agbanwe agbanwe dị ọtụtụ. Mgbe ejikọtara ya na nkwekọ nke nsonaazụ, nke a na-eme ha ezigbo ihe ngwọta n'oge ndị ntụgharị ga-achọ mgbanwe dịka ogo.